विश्वकप फुटबलको ड्र सार्वजनिक : कुन देश कुन समूहमा परे ? - Naya Pusta
विश्वकप फुटबलको ड्र सार्वजनिक : कुन देश कुन समूहमा परे ?
काठमाडौं । आउँदो वर्ष रुसमा हुने विश्वकप फुटबलको ड्र सार्वजनिक भएको छ। शुक्रबार रुसको राजधानीस्थित क्रेमलिन प्यालेसमा एक भब्य समारोहकाबीच ड्र सार्वजनिक भएको हो। विश्वकप खेल्ने ३२ टोलीलाई विजेता र उपविजेता प्रिक्वाटरफाइनलमा पुग्ने गरी ८ समूहमा विभाजन गरिएको छ।
सार्वजनिक ड्र अनुसार समूह ए मा आयोजक रसिया, साउदी अरेबिया, इजिप्ट र उरुग्वे परेका छन् भने समूह बी मा पोर्चुगल, स्पेन मोरोक्को र इरान पनि परेका छन्। त्यस्तै समुह सीमा सन् १९९८ विजेता फ्रान्स, पेरु, डेनमार्क र अस्ट्रेलिया परेका छन्। यसैगरी समूह डी मा अजेन्टिनामा , आइसल्याण्ड, क्रोएसिया र नाइजेरिया परेका छन् भने समूह ई मा ब्राजिल, स्वीटजरल्याण्ड, कोष्टारिका र सर्बिया परेका छन्।
समूह ‘एफ’ मा डिफेन्डिङ च्याम्पियन जर्मनीसँगै मेक्सिको, स्विडेन र दक्षिण कोरियाले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। समूह जी मा बेल्जियम, पानामा, ट्युनिसिया र इंग्ल्याण्ड परेका छन्। यस्तै समूह एचमा भने पोल्याण्ड, सेनेगल, कोलम्बिा र जापान परेका छन्।
उत्तर कोरिया र अमेरिकाबीच ‘वाक’ युद्ध
हट दृश्यले भरिएको अक्सर–२ को नयाँ गीत सार्वजनिक (भिडियो)
भारत भ्रमणको तयारीमा प्रधानमन्त्री, महाकाली सन्धिलगायत २२ वर्ष पुराना हिसाब खोजिने